Barrack Diego Maqaallo ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Barrack Diego
Barrack Diego waa qoraa khibrad u leh wax ku qora baraha internet-ka wuxuuna u qoray maqaallo dhowr boggag caan ah iyo degello internet ah oo ku saabsan adeegsiga kala duwan ee warbaahinta bulshada si loogu farsameeyo taraafikada ganacsi badan bogagga ganacsiga.
Jimco, Abriil 12, 2019 Jimco, Abriil 12, 2019 Barrack Diego
SMS (nidaamka fariinta gaagaaban) asal ahaan waa eray kale oo loogu talagalay fariimaha qoraalka ah. Iyo, inta badan milkiileyaasha ganacsiyada ma yaqaanaan laakiin farriimaha qoraalka ayaa si isku mid ah muhiim ugu ah siyaabaha kale ee suuqgeynta sida suuqgeynta warbaahinta bulshada ama suuqgeynta iyadoo la adeegsanayo qoraallo. Faa'iidooyinka la xiriira suuqgeynta SMS ayaa mas'uul ka ah inay ka dhigto mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan noocyada kala duwan ee ganacsiyada, kuwaas oo rajeynaya inay gaaraan macaamiil badan. SMS ayaa lagu yaqaan